Indlu Yomlando ezweni lewayini futhi eseduze ne-wou - I-Airbnb
Indlu Yomlando ezweni lewayini futhi eseduze ne-wou
Indlu Yesivakashi ka-MaMere isendaweni engokomlando ye-Howell House - ikamelo lokulala elingu-5, ikhaya lokugeza elingu-4 e-Monmouth, e-Oregon - idolobha lasekolishi elingajwayelekile. Ilungele imibuthano yomndeni, uhambo lwamabhayisikili noma ukunambitha iwayini. Ilala abantu abangu-14 ngokunethezeka. Setha phakathi nengadi yezimbali zama-rose ene-gazebo yangaphandle egcekeni elingemuva. I-Western Oregon University iqhele ngebanga nje elilodwa futhi izitolo zendawo/izindawo zokudlela zingaphansi kwebanga elilula lokuhanjwa ngezinyawo. Izindawo eziningi zewayini phakathi nemizuzu engu-25!
Sicela uqaphele: Amaphathi awavunyelwe. Lendlu inezitezi ezintathu.
Indlu Yesivakashi ka-MaMere yakhiwa ngo-1891 futhi Indlu ye-Howell Yomlando ifakwe kuRejista Yomlando. Iyathandeka futhi iyingqayizivele. Itholakala enkabeni yesifundazwe sewayini, idolobha lethu elincane lase-Monmouth liyindawo lapho ungahlola khona izivini ezizungezile futhi uvakashele i-Western Oregon University. Izingane ziba nesikhathi esimnandi emthonjeni we-splash nenkundla yokudlala e-Main Street park, ngaphesheya nje komgwaqo.
Indlu inezitezi ezintathu futhi ukucaca izitebhisi kuyadingeka ukuze ufinyelele emakamelweni okulala. Sinayo i-twin/trundle esitezi sokuqala esifundeni sethu - kodwa sisadinga ukulandelela izinyathelo zangaphambili. Wonke amabhavu ayisitayela esidala sobhavu onemilenze futhi adinga ukungena nokungena. Amabhavu amabili amane anama-shower amile futhi angu-2 anama-shower ase-Europe (izandla zibanjwe, hlala phansi amashawa). Sine-TV enamakhono okustrima nama-DVD amaningi, imidlalo nezincwadi - ne-wifi enhle kakhulu yokusebenzisa amathebulethi namadivayisi akho.
Siphinde sibe nomcimbi oseduze nendawo yokuphumula etholakalayo eqashwayo ebizwa ngokuthi yi-Carriage House (inethezeke imicimbi yabantu abangu-20-25, kuye ngokuthi isethwe). Uma unesifiso sokufaka kule ndawo, sicela ubuze kumnikazi ukuthi uyatholakala yini. Ukuqasha kuhlanganisa amatafula nezihlalo amahora angu-24.
Indlu Yesivakashi ka-MaMere isendaweni esuka e-Western Oregon University, e-Main Street futhi iseduze nezindawo eziningi zewayini, imizila yokuqwala izintaba nemizila yamabhayisikili emikhulu. Indlu yakhiwa ngo-1891 futhi inabo bonke ubuhle obungakulindela!
Ngokuvamile siyazingenela, kodwa siyakujabulela ukuhlangana nawe ubuso nobuso, uma uthanda. Vele usazise!